Mpamatsy famokarana fantsom-drano sy famokarana - mpamokatra rig fandavahana rano
Rig ary atsofohy rano fantsakana rano XSL7 / 350 dia karazan-tsoavaly feno fantsom-pandrefesana rano feno karazana hafainganam-pandeha miaraka amin'ny hafainganam-pandeha haingana, ny halalin'ny fitrandrahana 700m, ny savaivony fandavahana lehibe indrindra 500mm, ary ny hery fampisondrotana ambony indrindra an'ny rafitra feed 350kN.
Rig fandavahana tsara XSL3 / 160
Rig fandavahana fantsakana rano XSL3 / 160 dia karazan-javamaniry feno lobolika feno fandavahana rano avy eo ambony rano. Ampiasaina indrindra amin'ny fandavahana sy fotoana hafa izany. Antsoina hoe basy vy kely izy io izay ampiasaina amin'ny fantsakana. Mahomby. Ny halalin'ny fitrandrahana ambony indrindra dia 300m, ny savaivony fandalovana farany ambony dia 330mm, ary ny hery fampiakarana faran'izay betsaka amin'ny rafitra famahanana dia mety hahatratra 160kN. Mora ny miasa ary tena mety amin'ny fananganana.
Rig fandavahana fantsakana rano XSL7 / 360 dia mpandeha fandavahana fantsom-pandehanana feno rano ho an'ny lohan-drano. Ny halalin'ny fitrandrahana dia mety hahatratra 700m, ny savaivony mandalo indrindra dia 500mm, ary ny hery fampiakarana ambony indrindra amin'ny rafitra famahanana dia 360kN. Tena atokisan'ny mpanjifa izany. Ny haavon'ny varotra dia avo dia avo ary ny fahombiazan'ny vidiny dia tena tsara.
Rig fandavahana fantsakana rano XSL5 / 280 dia rig fandavahana lohan-drano feno lohan-drivotra. Ampiasaina indrindra amin'ny fikarohana geothermal, fandavahana ary fananganana hafa. Ny halalin'ny fitrandrahana faran'izay betsaka dia 500m, ny savaivony mandalo indrindra dia 400mm, ary ny hery fampiakarana ambony indrindra amin'ny rafitra famahanana dia mety hahatratra 280kN. Tsotra ny fandidiana, ny tontolo iainana ary ny fitsitsiana angovo.
Rig fandavahana fantsakana XSL12 / 600
Rig fandavahana fantsakana rano XSL12 / 600 dia mpandady fandavahana lohan-drano feno mpamily rano. Ny halalin'ny fitrandrahana faran'izay betsaka dia 1200m, ny savaivony mandalo indrindra dia 500mm, ary ny hery fampiakarana ambony indrindra amin'ny rafitra famahanana dia 600kN. Tena tsara ny fampisehoana, ho fantatrao aorian'ny fampiasana azy.